Ngubani uMgwebi wentengiso yakho? | Martech Zone
Ngubani uMgwebi wentengiso yakho?
NgoMvulo, nge-29 kaDisemba ngo-2014 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 2, 2015 Douglas Karr
Ndiyenzile kumanqaku endikhe ndawabhala ngaphambili. Ndineendlela ezinomlomo ongalunganga ezisetyenzisiweyo ngabathengisi… ekusebenziseni izithethi ezingafunekiyo ukuya kwiziphumo ezihlekisayo. Olunye urhwebo luyangena kwimithambo-luvo yam. Kodwa andinamsebenzi kulwabiwo-mali, kwaye nolwam uluvo alunyanisekanga.
Umhlobo kutshanje wabelane ngesibonelelo asifumene kwinkampani ebonakala ngathi likhadi eliqulathe kakuhle elinedilesi ebhalwe ngesandla kunye nesitikha esifakwe kwidilesi yokuphendula. Kwakubonakala ngathi ingavela kumhlobo okanye kusapho. Nangona kunjalo, xa wayivulayo-yayinokuthenjwa kwaye waziva ekhohlisiwe. Wayenomsindo, wathatha ifoto kwaye wabelana ngayo kuFacebook.
Andibuzi ukuba bekufanelekile ukuba angacaphuka-lelo shishini lakhe. Unelungelo kuluvo lwakhe. Umbuzo endiwuphendulileyo kwimpendulo yayileliphi ixesha ayisiyiyo Ukuthengisa ukuguqula uhlobo oluthile. Siyila iisayithi zokuqalisa ezincinci ezenza ukuba zibonakale njengamashishini amashishini. Siyila i-infographics ekumgangatho wehlabathi kubathengi abasokolayo kuhlahlo-lwabiwo mali lwabo. Sikhuseleka kwizifundo zamatyala kunye nobungqina obuvela kubathengi abafumana iziphumo ezilungileyo.
Ngaba yinkohliso leyo?
Ngokoluvo lwam, ukuthengisa kufana kakhulu nokuthandana. Awuyi kumhla kwezo zibilo zimnandi uziphosa kuzo. Uyahlamba, unxibe kakuhle, ulungisa iinwele zakho kwaye ulahle i-cologne ethile… ufuna ukubukeka.
Umbono unokuba ewe. Ujonge ukutsala umntu ngokwaneleyo ukuba abone ukuba ubathanda kangakanani. Emva kwemihla embalwa, unokuthatha okanye ungagqibi ukuqhubela phambili ubudlelwane.
Ukufumana isiqwenga seposi esithe sabhalwa ngesandla kunokutsala umntu ngokwaneleyo ukuba asivule. Xa ndandiqhuba iinkonzo zeposi ngqo, ndaxelela abathengi bethu ukuba kufuneka sithathe ingqalelo yomntu kuhambo olufutshane phakathi kwebhokisi yeposi kunye nenkunkuma. Oko kufuna ubuchule obunzulu bokuma ngaphandle kwesihlwele. Itekhnoloji ivele kakhulu kwi-imeyile ethe ngqo kangangokuba abanye abashicileli baneenkqubo ezingokoqobo bhala iilebhile kunye nokutshintsha ezinye izimbo zabalinganiswa ukuze kungabikho oonobumba ababini abajongeka ngokufanayo!
Ndiza kongeza ukuba ezo teknoloji azibizi. Umthengisi uchithe imali eninzi kwelo (lesimbo) elibhalwe ngesandla kunokuba bebeya kuncamathisela iphepha leposi elinye kwibhokisi yeposi. Ukuchitha imali eyongezelelekileyo ngokuqinisekileyo kukhokelele kwinqanaba eliphezulu lokuzibandakanya kwaye okunokwenzeka kukhokelele kwizinga lokuguqulwa okukhulu.
Umbuzo oyinyani okanye hayi wokuba ukuthengisa kuyakhohlisa ayingombono wam okanye owam umhlobo. Ijaji yokwenyani lithemba kwaye, ekugqibeleni, impumelelo yenkampani ekugcineni. Ukuba i-churn yabathengi ngumba omkhulu, umthengisi unokuba njalo ukutsala abathengi kodwa kunokwenzeka ulahlekile lulindelo kwaye kufuneka zilungelelanise iindlela zabo zokuthengisa.
Andiqondi ukuba ukutsala umntu oza kuvula, ukujonga okanye ucofe inkohliso- ndiyakholelwa ukuba ngumsebenzi wabathengisi ukuhambisa abantu kuhambo lokuthengisa kude kube kuthathwe isigqibo malunga nokuba umthengi angazuza na ngokwenza ishishini nawe .
Ukuvula imvulophu akubonisanga mntu ukuba abhalise, yenza nje umsebenzi omkhulu ekwenzeni ukuba ukuthengisa kwabo kujongwe endaweni yokubeka inkunkuma. Phantse yonke imihla ndizifumana ndibukele urhwebo, ndikhuphela iphepha elimhlophe, okanye ndivula i-imeyile endicinga ukuba yinkcitha xesha lam. Andicaphuki ngayo, kwaye andicinga ukuba yinkohliso.
tags: inkohlisoukuthengisa ngenkohlisoileta ngqoebhalwe ngesandla